Kushama zuva uye mabhenefiti ayo makuru | Bezzia
Kusvirwa nezuva usina kupfeka uye mabhenefiti ayo makuru
Susana godoy | 19/06/2022 20:00 | Runako
Zvino sezvo mamiriro okunze akanaka asvika, unogona kunge uri kufunga nezvazvo kutsva nezuva mushwi. Nekuti ndeimwe yeaya maitiro ari kuwedzera kukurudzirwa uye ane akawanda mabhenefiti aunofanirwa kufunga nezvawo. Chokwadi, pose patinozviisa pasi pezuva, tinofanira kungwarira zvikuru kuti titarisire ganda redu.
Saka kana tikazviita takashama, saka iwe unofanirwa kuzvitora zvakanyanya. As dzimwe nzvimbo dzemuviri dzinonzwa zvakanyanya kupfuura dzimwe. Zvakadaro, zvakangosara kuziva zvakanakira kukwanisa kupisa zuva sekuunzwa kwawakaitwa naMwari panyika. Zvichida mwaka uno iwe uchakurudzirwa kusiya swimsuit parutivi!
1 Kushama kwezuva kunowedzera mazinga ako evhitamini D
2 Inovandudza mafungiro
3 Hutano hwakawanda hwemoyo wako
4 Kuwedzera pfungwa yerusununguko
5 Inokudzivirira kubva kuchirwere cheshuga
Kushama kwezuva kunowedzera mazinga ako evhitamini D
Kunyange zvazvo zvisingakodzeri kuzvisunungura, hongu kuti kupisa kwezuva kuchaita kuti mazinga evhitamini D ave nani. Ndiyo imwe yeaya mavhitaminzi akakosha kune akasimba uye ane hutano mapfupa. Saka ichabvisa marudzi ese ezvirwere zvinoenderana navo. Pasina kukanganwa kuti nekuda kwevhitamini iyi kune mamwe mabasa emuviri anogona kudzorwa. Sezvo inewo anti-inflammatory properties. Saka unoziva kuti chinhu chakakosha muhupenyu hwako uye muhutano hwako.
Chokwadi ndechekuti kune vanhu vazhinji kupisa zuva vasina kupfeka ndeimwe yemaitiro akanaka. As ichawedzera serotonin uye pamwe nayo, kuti unzwe uchirarama. Saka izvi zvinogara zvichiunza kunzwa kwekufara kwatinofanirwa. Asi kwete izvozvo chete, asiwo, nemanzwiro iwayo ekuvandudza mafungiro, tinogonawo kutaura kuti kushungurudzika kunosara parutivi. Isu tinogara tichiedza kutsvaga sarudzo dzekuzvisunungura kubva mukushushikana uye hongu, kupisa kwezuva kunogona kuve imwe yeakanakisa. Iwe unozonzwa zvirinani nguva dzese, wakasununguka zvakanyanya uye iwo anogara ari nhau dzakanaka.
Hutano hwakawanda hwemoyo wako
Ndiwo muchina mukuru wemuviri wedu uye nekudaro, isu tinofanirwa kugara tichiutarisira zvakanyanya. Saka, kupiswa nezuva kwakanakira mwoyo nekuti zvinonzi inoderedza BP. Iwe unotoziva kuti ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvezvirwere zvemoyo zvakasiyana. Saka, kana tikazvidzivirira, tinozonzwa zviri nani uye zvakare, tichachengeta marudzi ese ematambudziko kure. Zvechokwadi, zvakare tinofanira kutaura kuva nevhitamini D yakawanda nokuti ndeimwe ichaita kuti mwoyo yedu ive noutano hwakanaka.
Kuwedzera pfungwa yerusununguko
Chokwadi pazviitiko zvakawanda, paunoenda kumahombekombe, unoziva Swimwear. Dzimwe nguva inoomesa, dzimwe nguva inodzika uye inogona kugara ichiomesa zuva redu zvishoma. Zvakanaka, imwe mukana wekutsva nezuva usina kupfeka ndeyekuti hauzove nematambudziko akafanana. Rusununguko ichave yako yakanakisa sarudzo yekukwanisa kunakidzwa nezuva uchiita zvaunoda zvakanyanya uye kuwana humwe hupenyu hushoma, nekuda kwezvimwe zvikomborero zvatanga tichitaura nezvazvo.
Inokudzivirira kubva kuchirwere cheshuga
Unozviziva here kuti kupiswa nezuva kwakanakirawo kudzivirira chirwere cheshuga? Zvakanaka, ndizvo uye unofanira kuzvifunga. Hongu, izvi zvakare zvine hukama nevhitamini D, iyo inoratidzika kunge ine simba rezvinenge zvese zvine chekuita nezuva. Ngazvive izvo, kuve nematanho akanaka evhitamini iyi uye kupisa kwezuva kune hukama uye zvakare kunotibatsira mune zvimwe zvakawanda zvehutano hwedu.
Saka, kana iwe uchida kuedza kupisa zuva usina kupfeka, iwe zvechokwadi uchawana bhishi rinokupa iyo sarudzo uye kuti iwe unogona kutanga kunzwa yega yega yega mabhenefiti senge atiri kutaura nezvawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Kusvirwa nezuva usina kupfeka uye mabhenefiti ayo makuru
Renaissance, album itsva yaBeyoncé, yatove nezuva rekuburitswa